३ बर्षिय दुधे बालकलाई के भयो यस्तो अचम्म? टाउकै भरि यस्तो भएपछी, बुवाआमाको गुहार माग्दै आए, बिचरा आशु झार्ने पिडा – Complete Nepali News Portal
३ बर्षिय दुधे बालकलाई के भयो यस्तो अचम्म? टाउकै भरि यस्तो भएपछी, बुवाआमाको गुहार माग्दै आए, बिचरा आशु झार्ने पिडा
काठमाडौ । भनिन्छ नि दुखसुख बाजा बजाएर आउदैन भनेर हो कुनै बेला यस्ले यति धेरै दुख दिन्छ कि जस्को कुनै कल्पनासमेत गरिएको हुदैन । हो यस्तै परेको छ दिपक र शोभा कार्कीको परिबारमा अहिले । जनतन केही बर्ष अगाडि दुबई गएर आफनो परिबारलाई हेरिरहेका दिपक अहिले निकै पिडामा भएपछि घर फर्किएका छन । घर त फर्किए तर ३ बर्षिय छोराको यो अवस्था देख्दा उनी झन बिचलित भएका छन । उनका छोरालाई यस्तो रोग लाग्यो कि अब उसलाई निको पार्न धेरै खर्च र ६—६ महिनामा एमआरई गरिराख्नुपर्छ । यदि यसो गरिएन भने यो फुल्न लागेको फूल बिचैमा जे पनि हुन सक्छ ।
हेर्दा यति राम्रो र क्युट छोरा जस्लाई यस्तोसम्मको रोग लाग्ला र उसको टाउको भरि किरैकिरा परेर हिडडुल त के राम्रो स“ग बस्न पनि सक्दैन होला भनेर कहिले पनि सोचेका थिएनन । जहा होचो त्यही घोचो भनेझै यो बालकलाई भएको पिडाले अहिले दुनिया रोएको छ, हेर्नुस त |